Kutengesa Robhoti • Goridhe, Oiri, Forex & Crypto • Miedzo & Ongororo
Kutengesa Bots & Cryptobots
Muenzaniso webhizimusi wemakambani anotengesa unopa varimi mukana wekutora chikamu mumisika yemari yemari, zvigadzirwa, simbi dzinokosha uye mari yemadhora. Nemarobhoti ekutengesa aripo, haudi chero ruzivo kana hunyanzvi mune zvemari kana IT kuvandudza. Saka rega maalgorithms ekutengesa achengete guta rako zvine hungwaru uye nokungwarira, isu tavasarudzira izvo.
Nekuda kwemutsa, ini ndichakutungamira uye nekupindura mibvunzo yako, asi ramba uchifunga kuti njodzi yekurasikirwa yakakosha seyakaunganidzwa inowanikwa. Chengetedza mari yawakagadzirira kurasikirwa. Tanga uye kuyedza marobhoti akarongwa ane diki yekutanga capital kuti unzwisise zano ravo.
Ruzivo rushoma runodiwa
Gadzira otomatiki passive mari nekudyara zvine hungwaru.
Saina, isa mari yako uye rega marobhoti atengese kwauri.
Unganidza zvaunowana nguva dzose uye mari yako yese nguva dzose.
Kutengeserana marobhoti nemikana yemari
Kutengesa marobhoti akaedzwa kwemwedzi yakati wandei, yakavimbika uye inoshanda
Sezvo kutengeserana kwamira kuve kodzero yenyanzvi, marobhoti ekutengesa akapinda muInternet uye anogona kuburitsa mari kune vanhu. Aya marobhoti ave nemukurumbira wekutengesa otomatiki, pachinzvimbo chevashandisi vavo, kuvachengetedza yakakosha nguva. Sezvo paine hutsotsi hwakawanda pachinhu ichi, tinoyedza, kuongorora uye nekuraira mamwe mabhoti ekutengesa kupfuura mamwe.
Iyo yakagadzirirwa kutengesa iyo XAU / USD vaviri vaviri neine yakaderera njodzi manejimendi uye ipfupi temu scalping zano. Scalping yakatsaurirwa kumusika wegoridhe.
Yakagadzirirwa kutengesa musika wekristptocurrency uye kunyanya Bitecoin BTC ine yakakwira musika kushanduka.
Inowanikwa muna 2022
AutoTrade Forex ndeye Indonesian mari yemusika yakateedzera yekutengesa robhoti. Autotrade Forex ichave ichiwanikwa munguva yezhizha ra2021.
Yakagadzirirwa kutengesa musika wemafuta. Autotrade Oiri ichavavarira kubheja kumusoro kana pasi zvichienderana nemutengo weduri remafuta.
Fin 888 irobhoti rekutengesa rekuIndonesia rinobva pakutengesa mari yefiat. Fin888 raive robhoti rakagadzikana asi risingashande paneAutotrade Gold.
Ecosystem yemarobhoti gumi nemasere anosanganisira maviri mucrypto akabatana neAPI Binance. Mamwe mabhoti achabatanidzwa kune broker Equiti yakadzorwa.
Yakagadzirirwa kutengesa iyo EUR / USD pair, iyo yekutanga maitiro ekushanda kwe SmartXBot inobva pane maitiro uye kutengesa kwezvinzvimbo zvipfupi. Zvishoma kushanda pane ATG.
Imwe yeakanakisa yekutsinhana inopa 4 marobhoti marobhoti zvinoenderana neinodiwa mari pairi.
Sisitimu yekutenga goridhe nemadhaimani nekubhadhara muFiat mari, kutumira kana crypto.
Indonesian yekutengesa marobhoti kutengesa musika wegoridhe. Profit kugoverana hurongwa se Smartxbot.
Indonesian yekutengesa marobhoti kutengesa iyo crypto musika pa broker Lotus International.
Forex musika wakavakirwa kutengesa robhoti.
Yakagadzirirwa kutengesa iyo EUR / USD vaviri, Yakafukidzwa ndeimwe yeakanakisa software inosanganiswa neyakagadzirwa njere uye imwe yeakanyanya epamberi ekuchengetedza njodzi matekinoroji.
Iyo yakagadzirirwa kutengesa iyo EUR / USD vaviri neine yakaderera njodzi manejimendi uye pfupi pfupi scalping zano.
Yakagadzirirwa kutengesa akawanda mari maviri maviri, Elitrob inoenderera ichiongorora Forex musika, ichitsvaga makiyi emasangano nhanho nenzvimbo dzine hukuru hwekutengesa mukana.
Yakagadzirirwa kutengesa akawanda maviri emari uye crypto pasi pe scalping uye zuva rekutengesa zano.
❌ Bit Robhoti
Kushambadzira-kwakavakirwa mari yekudzosera system.
Tsvaga marobhoti matatu anonyanya kuita scalping uye zuva rekushambadzira rinotarisirwa nevatengesi gumi nevaviri nekutengesa mari hombe yemari.
Kukwidziridza uye Kutarisisa kwemamwe marobhoti ekutengesa
Isu tinoongorora zvimwe kutengesa mabhoti uye vamwe havaratidziki kwatiri sevakavimbika uye vakasimba nekufamba kwenguva. Heino rondedzero isina-inoperera yekutengesa marobhoti isu tinotevera zvakanyanya: Smart Evo, Maestrem, GoldMine, Pipskiller, RoyalQ, BTS, Fortune8, RoboTop, King Trader, LVBet, Algate, Alyssa, Agility, Kirasi VIP, Ferrari, Ricabot, Vega88, Euro Miner, Millionaire Prime, Dragon, DGP Bot, Alphabet, Smartech, IQSmart, SpecialS , Ninebot, ISM, Viggo, AIC Genius, Anti MC, Ximple Trade, Crown, ER, MR X999, GTA88, Jaderock 78, RX1, Pro-100, Notheory, Sun Star Indo, Infinity Gold, GBPUSD, Index Scalper, Diamond, Bibot, ISM, GatotkacaFX, ProMax, Copet ...
Dzivisa aya marobhoti ekutengesa (Scams / Ponzi): EvoTrade, Eureka, Mark AI, King Coin, Antares, Sparta, Shigeru, King Gold, Mandaka, Voltnexo, LogicPro, Jokermoon, Tron Life, Zeppelin, HTFox, Skidn ...
Kunyangwe vatengesi vakanakisa vanovimba nemarobhoti kuti vatore maodha avo mumisika.
Iwo anokurumidza, kuverenga nekukurumidza, uye haana manzwiro.
Otomatiki ekutengesa marobhoti ari otomatiki masystem anoshanda zvinoenderana nemiparamende kana maseti akaiswa nezvikwata zvavo zvevatengesi. Paunenge uchinge wabatana neakaundi yako yekutengesa, iyo robhoti inozozvitorera zvigaro mumisika yemari pasina kupindira kwevanhu, izvo zvinobvisa zvikanganiso zvinokonzerwa nemanzwiro evanhu.
Aya ma software akagadzirwa nedonzvo rekugadzirisa maitiro ekutengesa uye nekuita purofiti inogara narini, ine njodzi / kudzoka chiyero. Aya maalgorithms epamberi akabatanidzwa nehungwaru hwekunyepedzera anogara achiongorora pamusika, otomatiki akavhura uye akavhara mashandisirwo ane yakanaka fund manejimendi (yakanyanya kudhirowa ye3%), uchishandisa rairo yakanangana nesvomhu, nhamba uye yakatarwa maratidziro emusika. mubati wehunyanzvi.
DigiPrime / Pansaka / Pantheratrade, kungofanana neMeta Capital vakagadzira kudyidzana kwakati nenyanzvi dzakasiyana mumunda wekutengesa otomatiki.
Robhoti imwe neimwe ine yayo yekutengesa nzira zvichienderana nemusika unotangwa. Ivo vanogara vachitariswa, vachigadziridzwa zvinoenderana nenhau dzehupfumi uye vakagadziridzwa nechikwata chevanyanzvi vatengesi.
Iyi inoenderera optimization maitiro yakakosha kuti uve nechokwadi chekubudirira kwenguva refu mhedzisiro. Musika we Forex imvura zhinji uye inogara ichichinja nharaunda. Iyi nhanho ye optimization inovimbisa kuti maalgorithms anogara pamusoro uye zvese zvinoshanda sezvazvinofanira.
"Kana iwe uri mutsva munyika yekutengesa marobhoti, tora kuraira kwangu: bheja mari yausingade, rega mutengesi atore mari dzako kusvikira wawana bheji rako rekutanga. Mushure meizvozvo, chete Bhonasi. "
Yako yemari zano
Shandisa iyo Combo
Robhoti / Crypto / Kuisira.
Heino imwe yenzira dzekudyara kuti ugadzire mari inongogara uchisiyanisa kusvika pakakwirira:
Shandisa rimwe kana akawanda marobhoti ekutengesa nekuisa mari ne brokers dzakasiyana.
Nezvakawanikwa zvakagadzirwa, tenga mari yemadhora pane huru yekuchinjana (Binance, Coinbase kana zvakare Crypto.com).
Tengesa kana kubata yako cryptomonnaies kuitira kuburitsa mubereko wepamwedzi uye/kana kutenga zvigadzirwa zvemazuva ese nemasevhisi necrypto yako senge Binance kadhi yekutenga chikafu, mugadziri webvudzi, peturu, kunyoreswa uye kutandara...
Akagadzikana uye anoshanda ekutengesa marobhoti
Chengetedza uye ushandise
Dzidza zvakawanda nezvekutengesa marobhoti
4 mibvunzo / mhinduro
Nei kusiyanisa mari dzako nekutengesa robhoti?
Kuisa mari mune robhoti yekutengesa inzira iri kuwedzera kukurumbira iyo inogona kuratidza kuve inobatsira. Nekudaro, yakakwira frequency kutengeserana inoumba ingangoita hafu yemirairo yakaiswa muFrance uye 70% yemirairo yakaiswa muUSA. Aya manhamba anoratidza zvakajeka kushanda kwerudzi urwu rwemari yekudyara.
Zvakawanda zvakanaka zvinofanirwa kucherechedzwa nekutengesa marobhoti:
- chekutanga, ivo vanoita kuti zvikwanise kuunza kukoshesa kurinani kwezvinhu, mitengo inochinjika nguva dzose kune kudiwa kwemusika,
- musika unowedzera kuwedzera mvura, nyore kutenga nekutengesa
- ivo vanoderedza mari yekutengesa kumakambani pamwe nevanhu
Ndedzipi mhando dzevanhu vanonyanya kufarira mukutengesa marobhoti nhasi?
Nhasi, kune akati wandei marudzi evanoisa mari vane njodzi vanoshandisa otomatiki kutengesa marobhoti:
Vanhu vari kutsvaga kusiyanisa masosi avo emari
Vanhu vakawanda vanoda kuita zvekutengesa kuitira kuti vawane mari yakawedzerwa. Kutengeserana marobhoti inzira yakanaka kwazvo mune iyi kesi nekuti inobvumidza iwe kuisa mari mumisika yemari pasina kuve nehunyanzvi hwakawanda sevatengesi vehunyanzvi.
Isu tinowana huwandu huri kukura hwevatengesi vanoshandisa marobhoti ekutengesa, sezvazviri pamwe nemarobhoti andinokupa iwe pane webhusaiti yazvino. Chokwadi, otomatiki kushambadzira kunoda kushoma basa uku uchibvumira kuburitsa mari zhinji. Vatengesi vachiri kungwarira kusarudza mhando yekutengesa marobhoti ayo anopa zviratidzo zvinobatsira uye zvinofungisisa.
Nguva dzose mari yekudyara
Vatengesi vanogara vachitsvaga mikana yekusiyanisa mari yavo. Kutengesa marobhoti ndiwo maitiro anowedzera kukwezva rudzi urwu rwehuwandu. Chokwadi, apo vatyairi ava pavanosangana nemarobhoti akanaka, havazeze kuisa mari zhinji.
Nei ndiri kupa rubatsiro rwangu mahara?
Chinangwa changu ndechekukutsigira iwe mukunyoresa marobhoti akaunzwa. Kubudikidza neyangu saiti, ini ndinongokuratidza ekutengesa marobhoti andakaongorora kweakawanda, akawanda mavhiki. Ehezve, panogara paine njodzi nekuti, ngatiyeukei, yega yekutengesa robhoti inoramba iine njodzi kudyara uye saka inogona kuunza kurasikirwa.
Ini ndinokupa iwe neruzivo rwese rwaunoda kuti utange mukutengesa otomatiki, mukujeka kwakazara. Chinangwa ndechekuti iwe uzive chaizvo zvauri kupinda mazviri pasina kushamisika kusingafadzi paunosvika.
Muhupenyu hwangu hwese, ndagara ndine shungu dzekugovana kuitira kuti ndibvumidze avo vakandipoteredza vafambire mberi. Izvo zvakangofanana neiyo saiti Robots-Trading.fr. Icho chiri nyore chokwadi chekuziva kuti ndiri kutora chikamu mukusimudzira kweprojekiti yako kugutsikana chaiko kwandiri.
Kutengeserana uye cryptocurrencies kwakava chido chechokwadi kubvira 2017. Ndakapedza maawa akawanda ndichiongorora misika iyi mitsva uye zvitsva zvekutsvaga mari zvinobva kwavari. Zvino, chinangwa changu ndechekugovera chido ichi newe kuti iwe unakirwe nacho.
Iwo akasiyana ekutengesa bots parizvino anowanikwa pamisika
Nhasi kune akati wandei marudzi ekutengesa marobhoti. Huru hwemarobhoti aya anosiyana zvinoenderana nekuvandudzwa kwemusika. Nekudaro, mimwe misika yakadzikama nepo mimwe ichave iine zvirevo zvinozivikanwa, kuwedzera kusagadzikana.
Maitiro asina kwaakarerekera ekutengesa marobhoti
Range-mhando yekutengesa marobhoti anotarisa zvakanyanya pamisika yakagadzikana uye isinganyanyi kushanduka. Aya marobhoti ekutengesa anoenderana nehunyanzvi chiratidzo (kutevedzana kwemapoinzi anobvumira kuongororwa kwemasheya emusika wemasheya kuitira kufanotaura nzira iyo mitengo ichashanduka). Iyo Range mhando yekutengesa robhoti ichaongorora izvi zvehunyanzvi zviratidzo nguva dzose uye kuita kutenga nekutengesa zviito kana musika ukava overbought kana oversold.
Kutengesa marobhoti echimiro chinotevera
Rudzi irworwo rwekutengesa robhoti richava nechokwadi chekuona mafambiro anoburitswa pamusika nekuvhura nzvimbo dzinotevera maitiro akakurisa ayo. Nekudaro, nguva yega yega robhoti painowona maitiro anogona kubatsira, ichavhura kana kuvhara nzvimbo. Ziva kuti zvinongofunga nezvezviratidzo zvisinga pikisane neyakajairwa.
Yakakwira Frequency Kutengesa Robhoti (THF)
Iwo ndiwo anonyanya kukwikwidza marobhoti ekutengesa. Izvo zvinonyanya kugadzirwa nemasangano emari. Ivo vanokwanisa kuita maodha mumasekondi mashoma (scalping). Chinangwa cheakakwira frequency kutengesa ndeye kushandisa zvishoma kuderera kuchinjika.